Ku saabsan Dugsiga Sare ee Minnetonka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dugsiga Sare ee Minnetonka: Waa meel wanaagsan oo wax lagu barto
Waxaan nahay dugsi sare oo u adeega ardayda fasalka 9aad ilaa 12aad. Waxaan ku noolnahay xaafad xaafad ah, hal dugsi sare ah, waxaan u adeegnaa sidii calanka Dugsiga Minnetonka. Waxaa naloo aqoonsaday mid ka mid ah Dugsiyada Sare ee ugu Fiican Ameerika Niche.com, US News iyo World Report, Newsweek iyo Washington Post.
Waxaan ku shaqeyneynaa lix maalmood oo dhaqameed ah, taas oo u oggolaanaysa ardaydayada 3,000 inay sare u qaadaan waxbarashadooda ayna dhammaystiraan casharro udiyaarin kulleejo oo buuxa. Dhismaheena waxaa lagu qalabeeyay tikniyoolajiyad casri ah maktabada / xarunta warbaahinta, sheybaarada fiisikiska, sheybaarada waxbarashada farsamada iyo fasalada qaabeynta qaab dhismeedka. Barnaamij tacliimeed adag ayaa ardayda si wanaagsan ugu diyaarinaya kulleej ama adduunka shaqada. Waxaan nahay mid ka mid ah dugsiyada sare ee ku yaal galbeedka metro ee bixiya iskuxirka xisaabta dugsiga sare ee dhaqanka oo ay ka mid yihiin: joomatari, algebra sare (trigonometry), horudhac xisaabeed, kalkulas, xisaab kala-beddel badan iyo tirakoob. Qoraalka waxaa lagu xoojiyay manhajka oo dhan marka lagu daro manhaj af Ingiriis ah oo aad ufiican.
Koorsooyinka Meelaynta Sare (AP) waxay u oggolaanayaan ardayda inay qaataan oo ay helaan dhibco maadooyinka heerka kuleejka ah ee xisaabinta, dhaqaalaha, suugaanta, curinta, cilmu-nafsiga, taariikhda, dawladda, farshaxanka wanaagsan, tirakoobka, kiimikada, fiisikiska iyo bayoolajiga. Koorsooyinka la dedejiyey ama hodanka ah waxaa lagu bixiyaa Ingiriisiga, xisaabta, sayniska, cilmiga bulshada iyo luqadda adduunka. Ardaydu waxay fursad u leeyihiin inay koorsooyin ka qaataan hay'adaha maxalliga ah ee dugsiga sare kadib barnaamijyada xulashada isqorista dugsiga sare ka dib.
Marka lagu daro barnaamijka AP, waxaan bixinnaa Barnaamijka Dibloomada Caalamiga ah ee Baccalaureate, kaas oo siiya heer caalami oo heer sare ah iyo qallafsanaan aqooneed oo loogu talagalay ardayda kuleejka ku xiran adduunka oo idil. IB waa daraasad qoto dheer, feker-kicineed oo daraasad ah inta lagu guda jiro sannadka yar iyo kan weyn, iyo qalin-jabinta diblooma waxay ka mid yihiin kuwa ku-soo-baxa heerka sare ee adduunka. Barnaamijka Daraasaadka Caalamiga wuxuu horudhac u yahay arday badan oo daneynaya inay la xiriiraan iskuulada aan la wadaaggano mid ka mid ah dalal kala duwan.
Ardayda yar-yar iyo kuwa waayeelka ah ee Minnetonka waxay sidoo kale ka heli karaan khibrad dhab ah oo adduunka ah oo ku saabsan goobaha xirfadeed iyada oo loo marayo barnaamijka VANTAGE ama Mashruuca Lead Lead The Way oo ardayda oo dhami waxay ku badin karaan fursaddooda Tonka Online.
Dugsiga Sare ee Minnetonka heerkiisa sare ee tacliinta waxay is barbar socdaan gacanta sare ee waxqabadyada manhajka. Ardaydu waxay ku fiicnaadaan mid kasta oo ka mid ah afarta A ee guusha dugsiga sare: Tacliinta, Waxqabadyada, Farshaxanka iyo Ciyaaraha fudud.
18301 Wadada 7